Mety efa nahita fitaovana an-tserasera maromaro ianao tamin'ny fanesorana sary tranonkala fa ny iray amin'ireo fitaovana mora ampiasaina amin'izany dia ny Saveallimages. Ny antony tena manan-danja tokony hampiasainao ity fitaovana ity dia tsy mitaky fahaizana manokana amin'ny programa izy io. Ary ankoatra izany, dia maimaim-poana tanteraka izany!
Ny fomba fiasany:
Tsy voatery hikirakira ny sary iray ianao aorian'ny iray hafa satria fomba mahazatra sy mandany fotoana. Tsy maintsy ampidirina ao amin'ny URL na rohy mankany amin'ny tranonkala ireo sary izay tadiavinao mba hikirakirana ao amin'ny modely nomena. Avy eo, tsindrio ny iray amin'ireo bokotra atolotra etsy ambany. Ny fitaovana dia mamonjy ireo sary rehetra ilaina ao amin'ny rakitra zip.
Misy teboka efatra etsy sy eroa ary izy ireo dia ho an'ny karazana save hafa. Mila mamintina ny safidy tianao indrindra ianao. Ireo bokotra dia natao ho an'ny fotoana mahasalama, feno, pagination, ary ny fomba famonoana sary mahery fihetsika.
Casual: Ity fomba ity dia mamonjy ireo sary lehibe rehetra eo amin'ny pejy amin'izao fotoana izao.
feno: Ity fomba ity dia natao hamonjena ireo sary avy amin'ny sary vetaveta eo amin'ny pejy amin'izao fotoana izao.
Fivoriambe: Ity fomba ity dia natao hamonjena ireo sary eo amin'ny tranonkala misy pagination. Na izany aza, tokony ho fantatrao fa io fotoana io dia mitaky fotoana lava lavitra.
Aggressive: Izany fomba izany dia mamonjy sary maro araka izay azo atao amin'ny pejy misy ankehitriny sy ireo pejy mifandraika amin'izany koa.
Mba hampiasa ity fitaovana maimaim-poana ity, mila mijery ny saveallimages.com ianao..Misy karazana mpikambana roa. Afaka ho tonga mpikambana maimaimpoana na mpikambana iray mendrika ianao. Raha ny tena marina, ilaina ny mijanona ho mpikambana maika mba hanandrana ilay fitaovana alohan'ny hanatsarana ny maha-mpikambana anao.
Ho toy ny mpikambana maimaim-poana, afaka mamafa sary 25 fotsiny ianao. Ankoatra izany, ny sary dia ho voavonjy amin'ny endriny voafetra. Faharoa, ny sary dia hovonjena amin'ny sora-baventy sy dokam-barotra sasany.
Etsy andaniny, amin'ny maha-mpikambana azy manokana, afaka mametaka sary hatramin'ny 1500 ianao isaky ny fangatahana. Ny sary dia tsy manana singa miendrika karatra ary tsy misy doka. Ankoatra izany, ny mambra rehetra ao amin'ny Premium ihany dia afaka mampiasa ny fomba fitenenana sy ny fomba famonoana mahery fihetsika. Azonao atao ny mamboly mpikambana iray isaky ny 3 $ isam-bolana.
Ny fitaovana dia miasa tsara amin'ny navigateur samihafa. Manohana ny Opera, Safari, Internet Explorer, Edge, Firefox ary Google Chrome. Ankoatra izany, miasa amin'ny Android, Windows sy IOS izy io. Afaka mahazo izany ao amin'ny Google Play ianao.
Mamonjy sary miaraka amin'ny kely indrindra amin'ny pixel 150 ary ny haavony kely indrindra 150 pixels. Tahaka ireo apps rehetra, dia havaozina tsy tapaka miaraka amin'ny endri-javatra maro.
Raha fintinina, ireo singa mahatonga ny "Mamonjy ny sary rehetra" dia fampiharana tsara kokoa noho ny ambaran'ny tranonkala rehetra:
• Tena mora ny mahatakatra sy mampiasa;
• Koa satria manangona ny sary rehetra ao amin'ny tranonkala indray mandeha, dia mitahiry fotoana betsaka izany;
• Na ireo tsy mpandrindra ny programa aza dia afaka mampiasa azy io satria tsy mitaky fahalalàna programa izy;
• Tsy mila maka sy mametraka fampiharana ianao;
• Manohana ny navigateur rehetra sy ny sehatra finday rehetra izy;
• Ny tena manan-danja indrindra, dia maimaim-poana izy raha tsy te hanavao ny maha-mpikambana anao Source .